Harare, Nov 24 (IBNS): Emmerson Mnangagwa was sworn-in as the new president of Zimbabwe on Friday.
Harare, Nov 22 (IBNS): Thousands of Zimbabweans cheered and partied all night long in the national capital after Robert Mugabe stepped down as the country's President, ending a near-four-decade rule.
Harare, Nov 21 (IBNS): Ending four decades of rule, Robert Mugabe resigned as Zimbabwe’s president on Tuesday.
Harare, Nov 20 (IBNS): Zimbabwean President Robert Mugabe can face further humiliation after he refused to quit his post as his party has already set the nonagenarian a deadline, reports said.
Harare, Nov 18 (IBNS): Amid the chaos surrounding Zimbabwe politics at the moment, the country is gearing up for a mass anti-Mugabe rally on Saturday.
Zimbabwean Army denies coup, says Mugube and family safe
Harare, Nov 15 (IBNS): Amid speculations by political commentators, Zimbabwean Army has denied that the country is facing a coup, while stating that Zimbabwean President Robert Mugube and his family are safe.
New York, May 9(Just Earth News): Drawing attention to the harrowing traumas of child victims of sexual violence, a Goodwill Ambassador for the United Nations Childrenâ€™s Fund (UNICEF) has called for greater recognition of the fact that it is â€œnot OKâ€ for children to be touched inappropriately as well as for raising awareness among youngsters that under-age sex can lead to pregnancy or sexually transmitted diseases.
Zimbabwe facing worst malnutrition rates in 15 years â€“ UNICEF
New York, Mar 16(Just Earth News/IBNS):Zimbabwe is facing its worst malnutrition rates in 15 years, as nearly 33,000 children are in urgent need of treatment for severe acute malnutrition, according to the United Nations Childrenâ€™s Fund (UNICEF).